राममायालाई जनताले दिए मतसहितको माया ! « News24 : Premium News Channel
राममायालाई जनताले दिए मतसहितको माया !
Posted By News24Nepal.TV || Date: 28 May, 2017
केहि हप्ता अघिसम्म राममाया बयालकोटीको परिचय एक सामान्य दलित परिवारकी महिलामा सीमित थियो । उनको दैनिकी पनि सामान्य नै भनौं घर गृहस्थी, मेला, पर्म, घाँसपात, पानीपँधेरो यस्तै यस्तै थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको नतिजाले राममायाको दैनिकी फेरिएको छ । उनी अब जनप्रतिनिधि बनेकी छिन् , अब उनको दैनिकी जनताको काममा व्यस्त हुनेछ ।
जब स्थानीय निर्वाचनको चहलपहल बढ्यो, तब सवल र सक्षम उम्मेदवारको खोजी हुन थाल्यो । यही बीचमा गोरखाको भीमसेन गाउँपालिका वडा न. १ ले एक त्यस्तो इमान्दार, हँसिली र मिजासिली स्वभावकी दलित उम्मेदवार पायो, तिनै थिइन् नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट भीमसेन गाउँपालिका वडा न. १ कि दलित महिला सदस्य राममाया बयालकोटी ।
राममायालाई नेपाली काँग्रेसको राजनीति खासै थाहा नभएपनि उनलाई यो भने थाहा थियो कि यो पार्टी अरुभन्दा फरक र बिशेष छ । अन्य पार्टीका गतिबिधि अघिल्लो पटक भएका संविधान सभाको चुनाबमा नियालेकी राममायालाइ अरु पार्टीको ब्यबहार र उनीहरुले गरेका काम प्रति कत्ति पनि चित्त बुझेको रहेनछ । उनको आस्था र पार्टी प्रतिको आकर्षण भने आफु बुझ्ने भएपछि बढेको बताइन् । जब दलित कोटाबाट उम्मेदवारको टिकट हात पारिन् त्यसपछि उनी आफ्नो पार्टीको प्यानल सहित बिजय गराउनको निम्ति दिन रात प्रचार प्रसारमै ब्यस्त भइन्।
मुसुक्क हाँस्दै म राम माया ! दलित वडा सदस्यको उम्मेदवार – कांग्रेसबाट , एक भोट है भन्ने बित्तिकै जो कसैलाई पनि एक भोट दिन उनले बाध्यनै बनाइन् ! मान्छे जस्तै मन पनि सफा, सफेद अनुहार मुसुक्क हाँस्दा उनमा दलित महिलाको हक हितका लागि पक्कै केहि गर्छिन् भन्ने उत्साह र उमङ्ग सर्लक्कै देखिन्थ्यो ।
अन्तत नतिजा पनि त्यस्तै आयो र राममाया र उनको टिमलाइ सबै मतदाताले माया दिए र उनी दलित वडा सदस्य बाट बिजयी भइन् । अब उनले नयाँ परिचय पाएकी छिन् – नेतृ राम माया बयालकोटी । अंझ भनौ पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भीमसेन गाउँपालिकाकै उनी पहिलो दलित महिला उम्मेदवार बनिन् ।
राममाया सामाजिक परिवर्तन र बिकास चाहन्छिन् । समाजमा भएका दलित महिलाहरुको अबस्था , विभेद र सामाजिक दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्न उनी दिनरात खटिने बताउछिन् । अहिलेपनि छुवाछुत जस्ता सामाजिक दुव्र्यवहारका घटना गाउँ गाउँमा दोहोरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिको अन्त्य मेरो पहिलो काम हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले र संविधानले स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायका लागि एउटा कोटा अनिवार्य गरेपछि राममायाको बाटो खुलेको हो र राममाया जस्तै धेरै अनुहारहरु वडा र स्थानीय तहको प्रतिनिधि चुनिएका छन् । राममायालाई हामीले यहाँ प्रतिनिधि उदाहरणकोरुपमा उभ्याएका छौ । आशा गरौँ राममाया र राममाया जस्तै अछुत भनिएका र विभेदको शिकार बनाइएकाहरको बिजयले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न मद्दत पुगोस । राममाया र राममायाहरुलाई हाम्रो पनि बधाई एवं कार्यकालको सफलताको कामना ।